Silicon Catheter, Catheter Foley, Urinary Catheter - RICHENG CAAFIMAAD
Xaraashka sanka lagu hagaajin karo
Circuit Neefsashada silikoon
Waxaa lala istcimaalaa mashiinka suuxinta iyo hawo-mareenka si loo sameeyo kanaal neefsasho aan dabiici ahayn oo loogu talagalay suuxinta ama bixinta oksijiinta bukaannada qalliinka.
Jiangsu Richeng Medical Co., Ltd., oo ah shirkad ka kooban maalgashiga kali ah ee Jiangsu Richeng Rubber Co., Ltd, waa soo saare caafimaad oo xirfad leh.
Shahaadada ISO13485 + CE, RoHS oo ay gaaraan shahaado 15 tusaalayaasha soosaarida moodalka
Baro waxbadan Richeng
Shirkaddu waxay leedahay aqoon-isweydaarsi heer-sare ah oo 100000 ah, waxay si adag u adeegsanaysaa nidaamka maareynta tayada ee aaladaha caafimaadka (ISO13485)
Jiangsu Richeng Medical Co., Ltd. oo ah shirkad ka kooban maalgashi kali ah oo uu sameeyay Jiangsu Richeng Rubber Co., Ltd., Waa soo saare caafimaad oo xirfad leh. Iyada oo loo maro cilmi-baarista sheybaarka caafimaadka, horumarka iyo wax soo saarka, waxaan bixinaa agab aaladda lagu kalsoonaan karo, oo aamin ah oo wax ku ool ah. Shirkadda waxay leedahay soosaarid iyo qalab dhameystiran, tikniyoolajiyad soo sareysa, oo leh maamul tayo sare leh, tikniyoolajiyad iyo shaqaale soo saar.